Saturday March 05, 2016 - 10:25:57 in Wararka by
Siyaasiyiin katirsan Ururka Damul Jadiid ee haya talada Dowlada Federaalka ayaa bishii lasoo dhaafay socdaallo ku tagay degmada Hobyo ee gobolka Mudug bartamaha dalka soomaaliya.
Shirar aan loo kala kicin oo dhaxmaray C/Kariim Guuleed,wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiisha ugu sarraysa kooxaha burcad badeedda ayaa ugu dambeyntii lagu go’aamiyay in labada dhinac ay isku biiraan ayna si wadajir ah ula dagaalamaan xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
SomaliMeMo ayaa heshay xog rasmi ah oo ku saabsan qaabka ay isugu biireen Burcad Badeedda gobollada dhexe iyo maamulka Galmudug ee Guuleed madaxda ka yahay.
Ugu horrayn Hoggaamiyaha Burcad Badeedda soomaaliya Max’med Garfaanjo ayaa dhammaan wixii hub iyo ciidan ahaa ee uu gacanta ku hayay wuxuu ku wareejiyay maamulka Galmudug taasi bedelkeedna wuxuu kamid noqay Hoggaanka sare ee maamulka Galmudug.
Saxiixa heshiiska ay iskula biireen Galmudug iyo Burcad Badeedda Damul Jadiid waxaa qalinka ku duugay Xasan Sheekh Maxamuud Hoggaamiyaha dowladda Federaalka balse saxaafadda ayaa laga qariyay.
Ina Garfaanjo Hoggaamiyihii Burcad Badeedda ayaa Galmudug uballan qaaday in fadhiidnimada uu ka saari doono maamulka Cadaado islamarkaana uu gacanta ku dhigi doono magaalada Xarardheere oo xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay maamusho.
Qodobada ugu muhiimsan ee heshiisku uu dhigayo waxaa kamid ah in labada dhinac ay kuwada shaqeeyaan awood qeybsi ciddii ka baxdo ay yeelanayso mas’uuliyadda burburka maamulka Galmudug.
Ku Dhawaad 50 gaari Tikinika ah iyo boqolaal qoryaha PKM-ka ayay burcad Badeedda Soomaaliya kula biirtay Galmudug taasi oo ka dhigan in 75% awoodda maamulka Galmudug uu heysto ina Garfaanjo.
Arrinta la yaabka leh waxay tahay Maamulka Galmudug wuxuu dhawaan sheegay in si isku mid ah uu ula dagaalami doono xarakada Al Shabaab iyo Galmudug!, waana jiha wareerin loo diray soomaalida iyo waxa loogu yeero beesha caalamka.
Kooxaha Burcad Badeedda oo tobankii sanadood ee lasoo dhaafay awood dhaqaale iyo mid melleteri ku lahaa gobollada dhexe ayaa hadda isku arka awood burcad ah oo huwan sharciyadda maamulka Galmudug ee Damul Jadiid madaxda ka tahay.
Dagaalladii Ugu Horreeyay oo Saraakiishii Ciidanka Burcad Badeedda lagu feentay.
Maalmo kadib markii midnimada ay gaareen labada kooxood ee Damuljadiid iyo Burcad badeedda soomaaliya ayay dagaallo culus ku qaadeen maamullada islaamiga xarakada Al Shabaab ee gobolka Mudug.
Taliyihii ugu sarreeyay kooxaha burcad badeedda ahaana gacanta Midig ee Max’med Garfaanjo Aadan Looyaan ayaa lagu dilay dagaalkii ugu Horreeyay ee Burcad Badeedda iyo Galmudug ku qaadeen xarakada Al Shabaab.
Billaawgii Bishii Maarso weerar kale oo ka dhacay tuulada Ceel-cabdi ayay Burcad Badeedda Galmudug ku waayeen taliye ku xigeenkii ciidankooda isagoo dhaawac garaab ah ayaa lageeyay Cammaara.
Guul darrooyinka is xigxiga ee soo gaaray Galmudug garabka Burcad badeedda ayaa laga yaabaa in uu dhinacyada ka dhax abuuro khilaaf iyo in heshiiskii hore lagu kala boodo.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in midnimada Galmudug iyo Burcad badeedda aysan wax cusub kusoo kordhin loolanka gobollada dhexe islamarkaana uu sharciyadda kasii dili doono maamulka Galmudug waaba haddii ay sharciyad lahaayeene.
Burcad badeedda ayaa fuxshi iyo xummaan idilkeed ku faafin jirtay Xarardheere iyo dhulka xeebaha Mudug shacabkuna waxay ka door bideen maamullada islaamiga ah oo meesha ka saaray colaaddii soo jireenka beelaha.
Liibaan Jeexow Cabdi
Koox Burcad badeed ah oo Markab ganacsi ku qafaalatay gobolka Bari.